Maanta imisa hawlood oo lacag umada lagaga urursanayo ayey dawladani weel usii tolatay ? - #1Araweelo News Network
Maanta imisa hawlood oo lacag umada lagaga urursanayo ayey dawladani weel usii tolatay ?
Xukuumadii tan hada talada haysa ka horeysay dhaliisha ugu badan ee loo hayey waxa ay ahayd in hawshii dawlada shicib lagu wareejiyey , sidoo kale si shaqsi ah macaash looga doonayey dadka.
Arimahani waxa ka mid ahaa
1- qalab la inoogu sheegay in gaadiidka lagu eegi doono oo berbera la dhigayey.By. Abdirahman Ismail Nouh
2- qalab la inoogu sheegay in shidaalka lagu eegayo oo isaguna berbera ahaa.
3- Madaarka Hargeisa oo lacago dheeraad ah lagu soo rogay oo badhna goleyaasha xeer dejinta laga soo sharciyeystay badhna aanay aheyn sharci.
4- Lacago xad dhaaf ah oo hay’addii wadooyinka ee madaxtooyadu la soo wareegtay dadka saartay oo cashuuraha lagu culeysiyey iyo lacago ay hay’addaasi iyo wasaaradii madaxtooyadu shacabka Somaliland ka ururisay oo min nus-saacihii caruuta waxbarashada ilaa qurbajooga la isugu dardaray .
5- Lacago badan oo lagu sheegay in lagaga hawl galay abaarihii oo waxna gudida abaaruhu haysay waxna dawladu maamulaysay.
6- lacago la saaray ganacsatada xoolaha oo maxjarada lagu qaadi jiray oo aad looga qayliyey .
7- liisamada wadista gaadiidka oo la sheegay in ay cashuuran yihiin mudo 3 sano ah oo lacag qaali ah lagu soo saari jiray ….iwm
Hawlahaasi xukuumadani halkay gaysay miyey wada qaramaysay mise si hoose ayuun baa dad kale loogu wareejiyey?
Ma lacago ayaa laga qaadi doonaa shacabka waa Kan wasiirka gaadiidka Somaliland wareegto ku saaray warqadan in baabuur walba la marin doono BBG badqabka gaadiidka ?
Miyey waajib tahay in umada laga qaado lacago aan xeer jideyn, mida kale geerashyada lagu eegayo gaadiidka iyo qalabka eegaya ma dawladaa leh, hadii aanay lahayn goormaa dadka loo soo bandhigay oo la baahiyey?
Daawanayoow waa dalkaagii.
By. Abdirahman Ismail Nouh.